Dharka caadiga ah ee Gobolka Andean | Wararka Safarka
Mariela Carril | 31/08/2021 17:00 | Colombia, dhaqanka
Akhriso "Gobolka Andean" oo waxaan ka fikirnaa Koonfurta Ameerika iyo dalal dhowr ah, laakiin dhab ahaantii, gaar ahaan, waxay tilmaamaysaa mid ka mid ah lixda gobol ee dabiiciga ah ee ka kooban Kolombiya. Sida iska cad waxaa loogu magac daray buuraha Andes.
Waa badhtamaha Kolombiya waxayna leedahay saddex laamood oo Andes ah, Bartamaha Cordillera, Galbeedka iyo Bariga. Dabcan waxay leedahay dhul -beereedyo ay ka buuxaan dooxooyin, dhul -weyne iyo canyons waana aag aad u qurux badan oo dalka ah. Dadka halkan jooga waxay leeyihiin caadooyinkooda iyo labiskooda si gaar ah ayaa ka mid ah. Markaas, Waa maxay dharka caadiga ah ee Gobolka Andean?
1 Gobolka Andean
2 Dharka caadiga ah ee Gobolka Andean
Sidii aan nidhi, waa mid ka mid ah gobollada dabiiciga ah ee Kolombiya. Hayso buuro badan iyo muuqaallo badan oo kala duwans iyo waliba, waa a aag aad u dad badan iyo dhaqdhaqaaq dhaqaale oo weyn. Halkaan waxaa ah Volcano Massif, Santa Rosa de Osos Plateau, Dooxada Cauca, waxa loogu yeero Nudo de los Pastos, Serranía de Perijá iyo Nevado de Tolima, si aan u magacowno dhowr ka mid ah hoosaadyadeeda.
Gobolka Andean qayb weyn oo ka mid ah ilaha biyaha Kolombiya ayaa ku yaal iyo dhul -beereedka baaxadda leh, oo ay ka mid yihiin Dhulka kafeega. Sidoo kale waa dhulkii caanka ahaa sumurudyada kolombiya iyo sidoo kale gobolka ay ku yaalliin Bogotá, Medellín iyo Calí.
Sidaan ku sheegnay maqaallada noocaan ah, ma jiro hal dhar -dhaqameed ee waa dhowr. Dhammaantood, dabcan, waxay la xiriiraan dhaqanka deegaanka iyo hiddaha. Gobolka Andean wuu ka duwan yahay sidii hore sincretism dhaqanka weyn: ilaa dhaqanka asaliga ah waxaa lagu daray tan iyo wakhtiyadii gumeysiga Dhaqanka Afrika iyo Isbaanishka. Haddii aan ku darsano cimilada iyo muuqaalka kala duwan, natiijadu waa dheri dhalaal dhaqmeed run ah oo cajiib ah.
Labisyada caadiga ah way kala duwan yihiin, waxaa jira kuwo duug ah, waxaa jira kuwo cusub iyo kuwa ka muuqda kaliya xafladaha dhaqanka ama kuwa la xiriira daqiiqad taariikheed oo gaar ah iyo wax kale. Haddaba, waxaan magacaabi karnaa qaar ka mid ah kuwa ugu caansan.
Aynu ku bilowno dharka caadiga ah ee Antioquia. Waa dhar fudud, oo ah dadka shaqeeya. Ninku wuxuu u labistaa sida caadiga ah ee muleterter -ka caadiga ah, oo la duubay surwaal dheer oo denim ah, shaati gacmo -qabad leh ayaa sidoo kale la duubay.
Madaxooda waxay ku xiran yihiin koofiyad leh xarig madow, sida Antioquia, oo leh baangad, poncho fudud iyo carriel (bacda maqaarka. Dhankooda, dumarka, caadiga ah qaxwaha qaxwada loo yaqaan chapolerasWaxay leeyihiin blouse cad oo leh gacmo -gacmeedyo ballaadhan iyo qoor -sarre, goonno dul -saaran goonni oo leh daabac ubax iyo xargo, iyo garbasaar u dhigma. Waxay kaloo xiran yihiin koofiyad ballaaran, espadrilles iyo dambiil gacanta.
El dharka caadiga ah ee Boyaca Waa diirimaad maxaa yeelay waa qabow halkan. Ninku wuxuu xirtaa surwaal madow, ruana dhogor bikrad ah oo qaro weyn, koofiyad maro ah iyo shaar cad oo macawis ah. Haddii ay dhacdo inuu qoob ka ciyaarka ciyaaro guabina, qoob -ka -ciyaar dadweyne, surwaalkii waa la duudduubay, espadrilles iyo koofiyad jipa ayaa la xirtaa. Oo naagtu? Waxay xidhataa goonno madow oo culus oo leh qaanso midabbo kala duwan leh, jaakad cad, jaakad midabkeedu yahay mid daabac leh, mantilla madow iyo koofiyad jipa ah, iyo noocyo kale.
Tolima waxay leedahay dhar qurux badan oo midab leh: dumarka goonnigu waa midabo badan, oo leh xargo xariir ah iyo cimaamad cad oo leh xargo wax ku ool ah. Waxay xirtaan cimaamad cad oo leh biibil, gacmo -gacmeed · / 4 iyo qoor dheer, sidoo kale xargo iyo goonnada lafteeda. Cagaha, espadrilles, sida ragga. Waxay xidhaan surwaal iyo shaadh cad iyo garbasaar gaduudan oo qoorta loo sudhay. Boorsada jeebka ah, oo ka samaysan faybar dabiici ah, lama waayo.
Tolima iyo Huila waa laba waaxood inkastoo aan ka hadlayno dharka Tolima haddana waxaa jira a Dharka Huila, dharka caadiga ah ee opita. Waxaa loo adeegsadaa qoob -ka -ciyaarka sanjuanero, dheesha rasmiga ah ee xafladda Reinado Nacional del Bambuco ee Neiva. Dumarku waa kuwo aad u qurux badan, oo leh goonno satin oo ballaaran oo leh saddex ruffles iyo ubaxyo aad u sarreeya, kuulyo iyo seedo lagu daray kabo, iyo cimaamad cad oo leh waxyaalo badan oo la isku qurxiyo. Madaxa, ubaxyo waaweyn. Ninka reer Huila wuxuu haystaa surwaal madow, suun maqaar ah, espadrilles iyo koofiyad shaar cad leh oo tubooyin ku yaal xagga hore iyo sein. Cimaamad cas oo dhammaystiran labbiska.
Santander sidoo kale waxay leedahay dhar u gaar ah. Dumarku waxay xidhaan goonno madaw oo aad u ololaysa, oo leh marsooyin midabaysan sida wax lagu qurxiyo geeska, shaati cad oo sidoo kale leh qaanso, espadrilles iyo koofiyad jipa ah. Ninku wuxuu xidhan yahay surwaal madow oo la duubay, laakiin hal lug ayaa mar walba ka sii duudduuban ta kale, shaadh cad oo ay ku xardhan tahay biin la daabacay iyo koofiyad leh baalal diirran oo xarrago leh.
Magaalada Nariño, rag iyo dumarba weylaha ayay ku muujiyaan hawada. Haweeneydu waxay leedahay blouse cad oo leh gacmo dhaadheer iyo goonno madow oo leh, hoosteeda, kabo midab leh. Waxa kale oo ay leeyihiin shawl xariir ah, maro jilicsan ama kabo dhogor ah, iyo koofiyad maro ah. Si loo waafajiyo, ninku wuxuu sitaa surwaal madow, shaadh cad, iyo baal -tolan oo garabka ka saaran.
Dacwadaha gaagaaban ayaa sidoo kale loo adeegsadaa Cauca. Dharka caadiga ah ee Cauca waa dad asaliga ah waxaana jira dhowr sababtoo ah halkan waxaa jira dhowr qowmiyadood. Laakiin, tusaale ahaan, waxaa jira dharka Guámbianos: nimanku waxay leeyihiin goonno buluug dhexe oo toosan oo buluug ah, funaanad suuf ah, garbasaar midab leh, koofiyad la dareemay, kabo ama kabo, suun iyo laba ruan, mid madow iyo cirro kale .. Goonnada haweeneydu waa mid toos ah oo madow ah, oo leh xirmooyin xariir ah oo u dhigma midabada shawladda. Shaadhku waa casaan ama buluug waxayna xidhan yihiin koofiyadaha la dareemay iyo silsilado cad.
Ilaa hadda qaar ka mid ah dharka ugu fiican ee caadiga ah ee Gobolka Andean, gobolka oo haysta dhowr waaxood: dhammaan waxa loogu yeero Qaxwada dhidibka (Quindío, Risaralda, Caldas iyo Antioquia), Huila, Nariño, Cundinamarca, Tolima, Santander, Boyacá iyo Norte de Santander.
Waa dhulka ciidaha badan ee caanka ah waxayna ku jirtaa ciidahaas oo ay soo baxaan dhammaan labisyadan cajiibka ah, quruxda badan iyo midabada leh.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » America » Colombia » Dharka caadiga ah ee Gobolka Andean